R/wasaare Gaas oo soo gaba-gabeeyey kulamo uu la lahaa xildhibaannada, kuna saabsanaa xulidda wasiirrada iyo meelmarintooda. – Radio Daljir
Muqdisho, July 03 – R/wasaaraha dawladda federaal KMG ah Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey ku hawllanaa la-tashi uu la yeelanayey mudanayaasha baarlamaanka dawladda, isagoo habab gooni-gooni ah kulamadiisu ay ku socdeen.
R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kulamada uu la yeelanayey mudanayaasha baarlamaanka waxaa ay ku saabsanaayeen la-talisho ku aaddanaa xulashada golaha cusub ee wasiirrada uu magacaabi doono iyo qal-qaalo la xiriirta meel-marintooda.
Inta badan kulamadii R/wasaaruhu la yeelanayey xildhibaannada ayaa la tilmaamayaa in si weyn iskugu af-gartay dhammaan waxyaabaha la isla soo qaaday, mudanayaashuna ay ku qanceen qorshaha ra’iisul-wasaaruhu ula yimid ee ku aaddan wax-qabadkiisa.
Xildhibaan Xasan Kaynaan Xalane, oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka oo maanta u warramay Radio Daljir ayaa sheegay in ay guulo ku dhammaadeen la-tashiyadii iyo kulamadii u socday R/wasaaraha iyo baarlamaanka, waxaana uu intaasi ku daray in ay ka filayaa macaabidda gole wasaaradeed oo tayo leh siina amba-qaada dadaallada dawladdu ay ku hawllanayd.
Xildhibaanku, waxaa uu dhinaca kale sheegay in ay aad ugu han-weynyihiin meelmarinta golaha xukuumadeed ee uu soo magacaabi doono R/wasaare Gaas, isagoo tusaale u soo qaaday codkii aqlabiyadda ahaa ee ay horay R/wasaaaraha ugu ansixiyeen.